Ungawasondeza njani amanani kwi-Excel 2013
Kwi-Excel 2013 usebenzisa umsebenzi weROUND ofunyenwe kwi-Math & Trig yemenyu yokulahla imenyu yokuqokelela okanye ukwehlisa amaxabiso amaqhekeza kwiphepha lokusebenzela njengoko ubunakho xa usebenza ngeespredishithi zezemali ezifuna ukubonisa amaxabiso emali kuphela kwidola ekufutshane.
Ngokungafaniyo xa ufaka ifomathi yenombolo kwiseli, echaphazela kuphela ukuboniswa kwenani, umsebenzi weROUND utshintsha indlela i-Excel egcina ngayo inombolo kwiseli equkethe umsebenzi. ROUND isebenzisa le syntax elandelayo:
Kulo msebenzi, ifayile ye- inombolo impikiswano lixabiso ofuna ukusondeza kulo, kwaye iinombolo zeedig_digits linani lamanani ofuna inani elijikeleziweyo Ukuba ufaka u-0 (zero) njengo iinombolo zeedig_digits impikiswano, i-Excel isondeza inani kwinani elikufutshane.
Ukuba wenza ifayile iinombolo zeedig_digits ukuphikisa ixabiso elifanelekileyo, i-Excel isondeza inani kwinani elichaziweyo leendawo zokugqibela. Ukuba ufaka iinombolo zeedig_digits ingxoxo njengenani elingelilo, i-Excel iyajikeleza inani liye ekhohlo kwinqanaba lokugqibela.
Endaweni yomsebenzi weROUND, ungasebenzisa ROUNDUP okanye ROUNDDOWN umsebenzi. Zombini iROUNDUP kunye neROUNDDOWN zithatha ezifanayo inombolo kwaye iinombolo zeedig_digits iimpikiswano njengomsebenzi weROUND. Umahluko kukuba umsebenzi weROUNDUP uhlala ujikeleza ixabiso elichazwe yingxabano yenani, ngelixa umsebenzi weROUNDDOWN uhlala ujikeleza ixabiso elisezantsi.
Eli nani libonisa ukusetyenziswa kweROUND, ROUNDUP, kunye neROUNDDOWN imisebenzi yokuqokelela ixabiso le-pi (π) yezibalo. Kwiseli A3, ixabiso lale rhoqo lingenisiwe (kunye neendawo ezilithoba kuphela zeqhezu elingaphindiyo elibonisiweyo xa ikholamu yandisiwe) kule seli, kusetyenziswa umsebenzi we-PI we-Excel kule ndlela ilandelayo:
Ke umsebenzi weROUND, ROUNDUP, kunye noROUNDDOWN kwiseli ye-B3 ukuya kwi-B10 yayisetyenziselwa ukujikeleza le nombolo inyuke iye ezantsi kwiindawo ezahlukeneyo zokugqibela.
isetyenziselwa ntoni i-levothyroxine
Iseli B3, iseli yokuqala esebenzisa omnye wemisebenzi ROUND ukurhangqa ixabiso le-pi, ukurhangqa eli xabiso ukuya ku-3 kuba usebenzise u-0 (zero) njenge iinombolo zeedig_digits impikiswano yomsebenzi wayo weROUND (obangela i-Excel ukujikeleza ixabiso kwelona nani likufutshane).
Qaphela umahluko phakathi kokusebenza kweROUND kunye neROUNDUP zombini kunye no-2 njengabo iinombolo zeedig_digits iimpikiswano kwiiseli B5 kunye neB7, ngokwahlukeneyo. Kwiseli B5, i-Excel ijikelezisa ixabiso le-pi ukuya ku-3.14, ngelixa kwiseli B7, inkqubo ijikeleza ixabiso layo ukuya kuthi ga ku-3.15.
Qaphela ukuba usebenzisa ROUNDDOWN umsebenzi nge-2 njenge iinombolo zeedig_digits impikiswano ivelisa iziphumo ezifanayo, 3.14, njengoko kusenziwa umsebenzi weROUND kunye no-2 njengengxoxo yesibini.
Iphilisi yeorenji mylan 4010
Ufunda njani i-piano chord
setha isikhombisi esisebenzayo kwi-r
iziphumo ebezingalindelekanga zamachiza
usike iimpawu zomonakalo wemithambo yomnwe
Uhlala nini u-advil pm